Akụkọ - Elon Musk nke Tesla na-ekwu maka otu nkedo nkedo na usoro mmezi nkwekọrịta ya
Elon Musk na nso nso a kesara ụfọdụ nkọwa nke atụmatụ mmezi nkwekọrịta nke Tesla, ụlọ ọrụ ahụ kwaliterekwa ụgbọala e ji ihe nkedo mee ihe. Mmelite ahụ na-enye Tesla ụfọdụ nghọta banyere ụzọ ndị na-apụta nke mmezi na ndozi ụgbọ ala, nke bụ akụkụ nke azụmahịa nke ndị na-emepụta ụgbọ ala eletrik, akụkụ a nwere ike ịbawanye ụba ka ụlọ ọrụ ahụ na-eto.
N'iburu n'uche na a ga-arụpụta ụgbọala nke Tesla site na iji nnukwu ọgbụgba, ndị otu mpaghara ụgbọ ala eletrik na-ajụ maka atụmatụ ụlọ ọrụ ahụ iji mezie mmebi nke ihe ọghọm dịka obere nsogbu. A sị ka e kwuwe, ọ bụrụ na ụgbọ ala eletrik nwere nanị obere ọnụ ọgụgụ buru ibu, ọ ga-abụ ihe ịma aka siri ike iji dochie akụkụ ụgbọ ala.
N'okwu a, o yiri ka Tesla ọ kwadoro ụzọ dị mma iji dozie nsogbu ndị nwere ike ịme otu ihe. Dị ka Musk si kwuo, ụgbọ okporo ígwè mgbochi nkukota nke ụgbọ ala ndị dị ka Model Y nke e mere na Germany pụrụ ịbụ nanị ndị “a ga-ebipụ ma jiri akụkụ ndị akpọchiri akpọchi dozie maka mmezi nkwekọrịta.”
N'iburu n'uche na nrụzi nke Tesla taa bụ ihe ịma aka ma sie ike, ọ ga-abụ ihe na-akpali mmasị ịhụ ma ojiji nke ụlọ ọrụ ahụ nwere akụkụ ga-eme ka nrụzi dị ọnụ ala ma ọ bụ karịa.
Na mgbakwunye na imelite usoro mmezi nkwekọrịta nke Tesla, CEO nke Tesla nyekwara ụfọdụ nkọwa zuru ezu banyere ngwugwu batrị nke ndị na-emepụta ụgbọ eletrik, bụ nke a na-atụ anya ka a ga-eji n'ụgbọala dịka grids S, Cybertruck Agbọ ala ọhụrụ emere na Germany. Y ụdị. Musk kwuru na ngwungwu batrị nwere ike inye nkwesi ike torsional ka mma na oge kachasị mma nke na-adịghị mma, si otú ahụ mee ka ụgbọ ala Tesla nwee nchebe.
Mpempe batrị ahụ ga-abụ ihe nrapado nke nwere batrị nke nwere ike ibunye ike ịkwa osisi n'etiti nchara nchara na nke ala, si otú a na-ewepụ ọtụtụ akụkụ ahụ dị n'etiti, ka ị na-enye nkwesi ike torsional ka mma na ogwe osisi dị elu Ma ọ bụ inertia. Nke a bụ nnukwu mmeri.
“Mpempe batrị ahụ ga-abụ usoro nrapado nke nwere batrị nke nwere ike ibunye ike ịkwa osisi n'etiti nchara nchara na nke ala, si otú a na-ewepụ ọtụtụ akụkụ ahụ dị n'etiti, ma na-enye nsị torsional ka mma na oge kachasị mma nke inertia. Nke a bụ nnukwu ọganiihu, ”Musk gosipụtara.
N'ụzọ na-akpali mmasị, onye ọkachamara na-ahụ maka ụgbọ ala bụ Sandy Munro kọwara nke a n'ụzọ doro anya, bụ onye rụtụrụ aka na batrị a haziri ahazi nwere ike ime ka Tesla nwee nchebe ma ghara ịnwe ihe mberede dịka ọkụ. N'ihe banyere Musk, ọ pụtara na nso nso a iji gosipụta ihe Munro kwuru wee gosi na Twitter na onye agha a "maara injinịa."
CEO Elon Musk kwuru na SpaceX ga-agbasa na mmalite ihe mgbu na-arị elu na-ewute and
CEO Elon Musk kwuru na nso nso a na Cybertruck ga-enweta "obere ndozi."